Tanaasul la'aanta Madaxweyne Farmaajo iyo sababaha ka danbeeya! - Ahmed Abdihadi
PoliticsSociety and Culture
Waxaa jirta dhowr arrin oo Madaxweyne Farmaajo ku riixaysa in uu ku adkaysto in sidan wax u wado. Arrimahan waxaa kamid:
1.Fahankiisa xukunka ayaa ahaa kaligiitalisnimo iyo in xoog la isku muuqiniyo. Arrintan waxay u laabanaysaa koritaankiisa iyo hanqaadkiisa siyaasadeed wuxuu billowday xilligii dowladdii kacaanka. Marka, sawirada maskaxadiisa ku jira ayaa ah dowladdii kacaanka oo tusaale fiican u ah.
Dad badan ayaa laga yabaa markaan sidan leeyahay in ay u fahmaan in aan qabiil ka wado; qabiil kama wado ee wali waxaa jira dad badan oo da’ kasta leh oo dowladdii ciidanka ee kaligiitalisku u tahay dowlad ku dayasho mudan.
Caddaymaha In Madaxweynaha dowladdii kacaanku tusaale u tahay waxaa kamid ah: sawaridiisa waddooyinka ku dhaggan, aasaaska xoogagga waddaniyiinta, burburinta iyo meesha ka saaridda awooddii barlamaanka, tii aqalka sare, iyo axsaabta siyaasadeed.
2. Madaxweyne Farmaajo waxaa u suurtagalay dhowr arrin oo markaas aad looga hor imaadsnaa laakiin u markii danbe u socday. Waxaa kamid ah: qaabkii loo dhisay maamulka Koonfurgalbeed, Galmudug, Hirshabelle, Dhiibstii Qalbi Dhagax, weerarkii Cabdirxmaan Cabdishakuur, hor istaagga madaxdii hore in ay dalka ukla safraan. Marka cilmi nafsiga laga hadlyo, qofka dhowr arrin oo khaladan haddii intuu sameeyo u socoto wuxuu aaminayaa in uu saxyahay.
Hadda wax ma u socon karaan maadama uu ku adkaystay in uu guddiga doorashada sii wado asaga oo aan tixgalin u samaynin saamilayda siyaasadeed ee dalka?
Seddex caqabadood oo ay adagtahay in uu ka gudbo ayaa dulsaarnay:
1. Dadka dulqaadii ayaa ka dhammaaday. Dad badan ayaa xeerinayay maadama uu yahay madaxweyns si sharci ah oo la doortay aan gacan qaad lagaga hor iman si nidaamka jira uusan u dumin. Laakiin maadama hadda muddo xileedkii sharciga ahaa 64 maalin ka dhimmatahay isla waddaddiina uu ku socda waxaa suurtagal ah in malayshiyaad waddada Makamukarama taagan aad aragto maalin dhow.
2.Arrimhii hore dhan waxay ahaayeen arrimo dad ama gobolo gooni ah la xiriira oo aan si guud dadka u wada saamaynaynin laakiin doorashadan waa mid qaran oo lamid ah tii uu asagu ku yimid. Marka, dadka raba in ay xukunka u tartmaan ma aqbalayaan in indhahooda oo shan ah laga xoog. Dhab ahaantee haddii ay xoog tagto, qofka koobaad ee la hubo in uu madaxnimada waaye waa Farmaajo.
3.Afartii sano ee la soo dhaafay waxaa masuul ahaa mucaaradka oo lahaa hala ilaaliyo dastuurka, iyo shuruuucda dalka, laakiin hadda waxay u badnaan in dhinaca Farmaajo ay ka iman sharciga ha la ilaaliyo sida laga dareemyo hadalladda xoogaga Mucaaradka.
Taladayda ugu danbaysa waxay tahay in Madaxweynuhu waaqica u soo laabto oo xaqiiqada dalkan ku suganyahay u soo laabto.
Waa see xaaladda xaquuqul insaanka ee Soomaaliya: Dood iyo aqoon iswaydaarsi